Shiinaha Oo Shaaciyay Tirada Muslimiin Uu Xabsiga Ku Hayo – Bandhiga
Shiinaha Oo Shaaciyay Tirada Muslimiin Uu Xabsiga Ku Hayo
Xukuumadda Shiinaha ayaa shaaca ka qaaday in ay xabiyo ku yaalla dalkeeda ay ku heyso 13-kun oo muslimiin ah.
Madax ka tirsan dowladda Shiinaha ayaa sheegay in laga soo bilaabo sanadkii 2014 ay xabsiyo ku yaalla gobolka Xinjiang ee dhaca galbeedka fog ay ku hayaan 13-kun oo muslimiin ah oo ay ugu yeereen argagixiso sida ay maanta shaacisay dowladda dalkaasi.
Hadalladaasi oo mu muuqda siyaasad dheer oo dowladda dalkaasi ay ku difaaceyso qorshaha midab takoorka ah ee ay ku heyso dadka muslimiinta ah, gaar ahaan kuwa asalkoodu yahay dalka Turkiga.
Xukuumadda Beijing waxa soo wajahay wallaac sii kordhiyay muddooyinkii dambe oo ka imaanaya beesha caalamka,gaar ahaan khuburo ka tirsan Qaramada Midoobay ayaa sheegay in xerooyin ama xarumo gaar ah lagu hayo dad muslimiin ah oo u badan Uighurs, kuwaas oo gaaraya hal Milyan oo ruux.
Shiinaha ayaa ku celisay in ay u baahan tahay tallaabooyin ay ku qaaddo cabsida mileteri ee kooxaha muslimiinta,waxayna xarumaha lagu hayo muslimiinta ku tilmaantay kuwo dhaqan-celin ah.
Tan iyo sanadkii 2014-kii gobolka Xinjiang waxaa ka dhacay shaqaaqooyin gaaraya 1,588,waxaana la qabtay 12,995 ruux halka gacanta lagu dhigay 2-kun oo walxaha qarxa ah,iyadoo dad gaaraya 30,645 ay saameeyeen culeys ka yimid dowladda Shinaha.